सार्वजनिक सवारीमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम – Khabaarpati
सार्वजनिक सवारीमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम
October 31, 2020 goodmamLeaveaComment on सार्वजनिक सवारीमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम
काठमाडौं, १५ कात्तिक । अब सार्वजनिक सवारीका अनिवार्य रुपमा यात्रुले देख्ने ठाउँमा भाडादर टाँस्नुपर्ने भएको छ । यदी नराखेको पाइएमा कारवाही गरिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै महाशाखाले सार्वजनिक सवारीहरुले यात्रुहरुको सहजताका लागि अनिवार्य भाडादर राख्ने नियम लागू गरेका बताएको छ ।
महाशाखाले अभियानकै रुपमा संचालन गरेर सार्वजनिक सवारीमा भाडादर टाँस्ने काम गरिहेको छ । शुक्रबारबाट थालिएको यो अभियान निरन्तर चल्ने बतायएको छ । हालसम्म महाशाखाले ४ सयभन्दा बढि सार्वजनिक सवारीहरुमा भाडादर टाँसेको जनाएको छ ।
आगामी दिनमा भाडादर नराखिएको पाइएमा कारवाही हुने महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरु ठगिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । सार्वजनिक सवारीहरुले यात्रुहरुबाट मनपरी भाडा लिने गरेको पाइएको थियो । यो अभियानले यात्रुहरुलाई यात्रा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
त्यस्तैगरी सवारी साधनहरुलेआरक्षण सिट राखेर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, हर्न बजाउन नपाइने, ढोका खुल्ला नराख्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएका छ ।
हातको छाला नराम्रो भएर देखाउन लाज मान्नुहुन्छ ? उसोभए अपनाउनुहोस् यो घरेलु उपाय
यात्रुलाई अलपत्र छाडेर पानीजहाजबाटै हाम फाले क्याप्टेन, यस्तो छ कारण
करोडौंको घर, सम्पति भएका दम्पतीलाई आफ्नै डा. छोराले सबै सम्पति हडपेर सडकमा पुर्‍याए पछि (भिडियो)
March 4, 2021 goodmam
दिनभरि माछा मारेर २ सय पनि नकमाउने लछुमनलाई जब साढे ५ करोड कर छली गरेको पत्र आए…
काठमाडौँमा फेरि बज्यो खतराको घन्टी , के अब तेस्रो लहरको संकेत हो ?
ठाकुर जस्को आफ्नो घर छैन, श्रीमती र छोराको मृत्यु July 27, 2021